Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Israely » Fehin-tànana fahalalahana: soloin'i Israel fitaovana fanaraha-maso ny hotely karantina
Fehin-tànana fahalalahana: Fitaovana fanarahan-dia no manolo ny hotely karantina ao Israel
Nohamafisin'ny tompon'andraikitra israeliana fa ny brasele de recherche dia hampandre ny manam-pahefana fotsiny raha misy miala any amin'ny faritra natokana ho azy ireo
Israel dia manolotra gadget elektronika fanaraha-maso COVID-19
Afaka mitokana irery ny Israeliana ao an-trano fa tsy ireo hotely tantanan'ny governemanta
Ny manitsakitsaka ny lalàna mitoka-monina dia mety hosaziana hatramin'ny 1,500 $
Nandany ny volavolan-dalàna omaly ireo mpanao lalàna israeliana, izay nanolotra ny fahefan'ny manampahefana ao amin'ny firenena hanery ny olom-pirenena israeliana hiverina an-tanindrazana hitafy fitaovana fanaraha-maso nomerika - ilay antsoina hoe 'fehin-tànana fahalalahana' - nandritra ny fotoanan'ny quarantine COVID-19 azy ireo. Ankehitriny, Israeliana dia afaka mitokantokana any an-trano, fa tsy ireo hotely tantanan'ny governemanta, raha mbola manaiky ny hitafy ny fitaovana elektronika izy ireo.
The Israeli Knesset nandany ny lalàna rehefa tapitra ny faran'ity volana ity ny fepetra teo aloha nitaky quarantine tany amin'ny hotely tantanin'ny governemanta.
Naroso tamin'ny herinandro lasa teo, ny lalàna vaovao dia manao fanavotana ho an'ny zaza latsaky ny 14 taona ary mamela ny mponina hangataka fialana amin'ny komity manokana. Ireo izay tsy mety miakanjo ny bracelet dia takiana amin'ny toerana mitokana ao amin'ny iray amin'ireo hotely misy quarantine, izay hitohy hiasa. Ireo manitsakitsaka ny lalàna mitoka-monina dia mety hosaziana hatramin'ny 5,000 hetsy israeliana (1,500 $).
Ireo mpitsangatsangana izay mampiseho ny antontan-taratasiny manaporofo fa nahavita vaksinin'ny coronavirus feno izy ireo, na ireo izay efa nifanekena ka sitrana tamin'ny aretina, dia afaka mandingana ny quarantine, raha toa ka manaporofo fa ratsy io viriosy io na taloha na taorian'ny nahatongavany teto amin'ny firenena.
Ny fehin-tànana manara-penitra dia natomboka voalohany tamin'ity volana ity tamin'ny fandaharana mpanamory fiaramanidina iray tao amin'ny seranam-piaramanidina Ben Gurion ivelan'ny Tel Aviv, izay nahitana fitaovana 100 natokana ho an'ireo mpandeha tonga. Tamin'izany fotoana izany, Ordan Trabelsi, ny CEO an'ny SuperCom, ilay orinasa ao ambadiky ny fehin-tànana, dia nilaza fa manantena ny hanitatra ny tetikasa ho an'ny "fampiasana malalaka" manerana an'i Israel izy. Raha ny filazan'ny i24 News dia fehin-tànana 10,000 no nozaraina, ary misy 20,000 XNUMX hafa antenaina ho vonona amin'ny herinandro ambony.
Nanamafy ireo tompon'andraikitra Trabelsi sy israeliana fa hampahafantatra ny tompon'andraikitra fotsiny ireo fehin-tànana mpanara-maso raha misy miala amin'ny faritra voatokana ho azy ireo, matetika ny tranony manokana ary milaza fa tsy hampita ny angon-drakitra na fampahalalana hafa. Tamin'ny fanambarana an-gazety tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nirehareha ny SuperCom fa ny Israeliana dia nitatitra “zavatra niainana tena tsara sy nahafinaritra” ary “taha ambony amin'ny fahafaham-po” tamin'ny fehin-tànana.
Ho fanampin'ny bracelet tenany, izay miasa amin'ny GPS sy Bluetooth, ny mpampiasa dia omena fitaovana mitaingina rindrina ihany koa, izay samy afaka ampiarahina amin'ny rindrambaiko finday avo lenta.
Ny drafitra fanaraha-maso coronavirus mitovy amin'izany dia naseho tany amin'ny toeran-kafa manerantany, miaraka amin'ny Google sy Apple amin'ny famoronana fampiharana finday avo lenta hanampiana ireo tracers fifandraisan'ny taona lasa. Mampahafantatra ireo mpampiasa ny teknolojia raha mifanerasera amin'ny olona voan'ny aretina izy ireo, saingy, tsy toy ny programa Israeliana, dia mbola niasa an-tsitrapo hatrany, ka mitaky ny fidiran'ny mpandray anjara.
Ny EU dia nanala ny Digital Green Certificate ho an'ireo mpandeha vita vaksinin'ny COVID-19
Nikatona ny seranam-piaramanidina TLV: fanafihana balafomanga Palestiniana vs baomba posiborora Israel?